Thu, May 26, 2022 | 14:03:17 NST
कुवेतमा सेक्युरीटी गार्डमा जान पाइन्छ ?
युवराज कोइराला, उदयपुर - म कुवेत जान चाहन्छु ,कुवेत जान कति खर्च लाग्छ ? अनि सुरक्षा गार्डको काममा कुवेत जान मिल्छ की मिल्दैन ? विदेश जाँदा सीप सिकेर मात्रै जानुपर्छ भन्ने सुनेको छु ,सेक्युरिटी गार्डको तालिम दिने त्यस्ता संस्था छन् कि छैनन् ? ज्ञानु गैरे, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघः प्रायः हरेक मुलुकमा नेपाली कामदारलाई सुरक्षा गार्डमा लिने चलन छ । प्रहरी वा सेनामा काम गरिसकेको अनुभव भएकालाई अझ धेरै पारिश्रमिक दिईन्छ । तालिम लिएर गएकाहरुले बिभिन्न सुपर मार्केटहरुमा काम प...
एजेन्टले पासपोर्ट फिर्ता दिएन, म के गरौं ?
सुन्दरकुमार बिष्ट, प्यूठान - बैदेशिक रोजगारमा जानको लागि भनेर ६ महिना अघि एकजना एजेण्टलाई मेरो पासपोर्ट दिएको थिएँ । तर उसले न मलाई विदेश पठाउँछ न मेरो पासपोर्ट फिर्ता दिन्छ । अव मैले के गर्दा उचित हुन्छ होला ? दिवस आचार्य, निर्देशक बैदेशिक रोजगार बिभाग : सुन्दर जी, तपाईले कुन कम्पनीका लागि कुन एजेण्टलाई पासपोर्ट बुझाउनु भएको हो त्यो कुरा राम्रोसँग बुझेर आफ्नो समस्या खुलाएर बैदेशिक रोजगार बिभाग, तिनकुने काठमाडौंमा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ । त्यसरी उजुरी दिएपछि तपाईको पासपोर्ट हामीले फिर्ता गर...
युएईको दुवई जान के कस्ता प्रकृया पूरा गर्नुपर्ला ?
म एसएलसी पास गरेर बसेको छु । म वैदेशिक रोजगारका लागि युएईको दुवई जान चाहन्छु । त्यसका लागि आवश्यक के कस्ता प्रकृया पूरा गर्नुपर्ला ? योगराज बराल, निर्देशक, उजुरी तथा अनुसन्धान, वैदेशिक रोजगार बिभाग -युएई एउटा खाडी मुलुक भित्रको बिकसित देश हो । मुसलमान धर्म मान्ने र राजा राष्ट्र प्रमुख भएको देश युएई, हङकङ जस्तै राम्रो छ । दुवईसँगै युएईका अरु ठाउँमा पनि नेपाली कामदारले अन्य ठाउँको तुलनामा राम्रो तलव पाईरहेका छन् । तर तपाई जान खोज्नु भएको ठाउँ दुवई निक्कै गर्मी हुने ठाउँ हो । युएईमा गएर...
साइप्रसमा अहिले नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ की छैन ?
योगराज बराल, निर्देशक, उजुरी तथा अनुसन्धान, वैदेशिक रोजगार बिभाग - साईप्रसको लागि नेपाल सरकारले रोजगारमा जान रोक्का गरेको छैन । तर हाल साईप्रसको अवस्था जटिल भएको देखिएको हुनाले दुतावास मार्फत प्रमाणिकरण भएर आएमा मात्र त्यसलाई स्वीकृती दिने गरिएको छ । त्यसरी प्रकृया नमिलाई आएकालाई सिधै स्वीकृति दिने गरिएको छैन ।
भिसा शुल्क कति तिर्नुपर्छ ?
मैले एकजना एजेण्टलाई मेरो एमआरपी (पासपोर्ट) दिएको थिएँ । उसले भिषा लगाईदिएछ । तर म नजाने भएपछि उसले भिषा शुल्क र बिमा बापतको रकम तिरेमा मात्रै पासपोर्ट फिर्ता दिने, नत्र नदिने भनेको छ । भिसा शुल्क कति तिर्नुपर्छ ? ज्ञानु गैरे, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - यसका बारेमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले प्रष्ट ब्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुमा राहदानी (पासपोर्ट) दिएर भिसाका सम्पूर्ण प्रकृयाहरु पूरा गरिसके पछि रोजगारमा ज...